Fanasana an'i Apple ho an'ireo mpamorona fampiharana hianatra ny fomba fampiasana catalyst | Avy amin'ny mac aho
Ny orinasa dia miloka be amin'ny mpamorona ary manambara andiana atrikasa mifandraika indrindra amin'ny fifindran'ny fampiharana avy amin'ny iPadOS mankany amin'ny macOS. Amin'ity tranga ity, ny fotoam-pivoriana mitondra ny lohateny "Ento ny fangatahanao iPad amin'ny Mac" dia hatao an-tserasera mandritra ny andro maromaro. Apple dia manome andro maromaro ho an'ireo mpamorona ireo hanatanterahana ny fotoana. Amin'ity tranga ity amin'ny 15, 18 sy 19 febroary ary 8, 10 ary 12 martsa.
Apple mizara amin'ny alàlan'ny mailaka amin'ireo mpamorona azy rehetra ny safidy hamindra ny fampiharana avy amin'ny iPadOS mankany amin'ny macOS. Ho an'izany manentana azy ireo handray ny dingana ary hiditra amin'ilay làlana amin'ny alàlan'ny fandefasana ity mailaka ity:
Catalyst for Mac dia ahafahantsika mitondra ny rindranasao avy amin'ny iPad mankany Mac. Ianaro ny fomba hanatsarana ny fampiharana anao ary ampiasao ny Catalyst hamoronana rindranasa zanatany ho an'ny Mac izay mizara kaody sy loharano loharano mitovy amin'ny iPad. Jereo ireo fiasa farany iPadOS 14 izay afaka mamonjy fotoana be dia be mandritra io dingana io, ary tadiavo ny fomba fampidirana ireo fiasa sy fanaraha-maso miavaka amin'ny sehatra toa ny AppKit hahafahanao mamorona rindranasa iray izay mahatsapa mitovy amin'ny nananganana azy manokana ho an'ny Mac.
Azontsika atao ny milaza fa ity dia fanasana fanindroany ho an'ireo mpandraharaha izay te-hanana traikefa ianarana miaraka amin'i Apple amin'ny fomba tsotra sy haingana hamindrana ireo rindram-baovaon'izy ireo avy amin'ny iPad mankany amin'ny Mac. Mazava ho azy fa hankasitraka ireo atrikasa ireo sy ny mpampiasa koa, satria izahay dia hanana fampiharana bebe kokoa ho an'ny ekipanay. Azo antoka fa hahita hetsika mitovy amin'izany bebe kokoa ho an'ny mpamorona amin'ity taona ity isika ary izany ve ny safidy hankalazana ny WWDC amin'ity taona ity dia hiandry ny fivoaran'ny areti-mandringana ihany koa, zavatra izay mbola sarotra vinavinaina ankehitriny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Programa Mac » Mac App Store » Fanasana Apple ho an'ny Developers Application hianatra Catalyst
Ny fanambin'ny volana am-po dia efa hita ao amin'ny Apple Watch
Safari Technology Preview kinova 120 misy izao